Qaabka Uu Mareykanku Ku Helay Xogta Safarkii General Qasem Soleimani Iyo Basaasiintii Kala Shaqeeyay – somalilandtoday.com
Qaabka Uu Mareykanku Ku Helay Xogta Safarkii General Qasem Soleimani Iyo Basaasiintii Kala Shaqeeyay
(SLT-Baghdad)-Jaajuusiin la shaqeeya Mareykanka oo ku kala sugan garoomada diyaaradaha ee Damascus iyo Baghdad ayaa ka caawiyey Mareykanka inuu helo xogta safar ee Jeneral Qasem Soleimani, kadibna dilo, waxaa sidaas werisay wakaaladda wararka Reuters.
Soleimani iyo afar ilaalo ah oo ka tirsan Ciidamada Kacaanka Islaamiga ah, ayaa diyaaradda Cham Wings kasoo raacay magaalada Damascus, kadibna soo aaday Baghdad.
Soleimani ayaa ku safrayey diyaarad rakaab ah, isaga oo ka fogaaday inuu adeegsado diyaarad gaar ah, si aan loo beegsan. Sidoo kale, Soleimani iyo ilaaladiisaba marnaba laguma darin xogta rakaabka diyaaradda, si aan looga war-helin.
Sidaas oo ay tahay, Soleimani ayaa markii uu yimid Baghdad, oo ay soo galbniyeen kolonyo ka kooban laba baabuur, waxaa lagu dhuftay laguna dilay gantaal ay soo rideen Mareykanka.
Baadhayaasha Ciraq ee kiiskan ayaa rumeysan in dad ka shaqeeya garoomada diyaaradaha ee Baghdad iyo Damascus balse si hoose jaajuusiin ugu ah Mareykanka ee gudbiyeen xogtiisa.
Baadhitaanka kiiskan ayaa waxaa hoggaaminaya Falih Al-Fayadh oo ah la-taliyaha amniga qaranka Iraq.
Dadka la tuhunsan yahay waxaa ku jira laba saraakiil amni oo ka shaqeeya garoonka diyaaradaha Baghdad, laba ka mid ah shaqaalaha shirkadda diyaaradaha ee Cham Wings, jaajuus ka shaqeeya garoonka Damuscus, iyo qof kale.
Hay’adda sirdoonla Iraq ayaa rumeysan in lixdan qof, oo aan weli la xidhin, ay qeyb ka yihiin shabakad jaajuusiin ah, oo si hoose ula shaqeeya Millatariga Mareykanka, islamarkaana u gudbiya xogaha muhiimka ah.
Labada shaqaale ee shirkadda Cham Wings ayaa waxaa sidoo kale baadhitaan ku haya sirdoonka Syria, sida ay laba sarkaal oo amni u sheegeen Reuters.
Natiijada horudhaca ah ee baadhitaanka ayaa muujineysa in xogtii ugu horreysay ee Soleimani ay soo gudbiyeen kooxda garoonka diyaaradaha Damascus, sida uu sheegay sarkaal amni.
Shaqada unuga sirdoonka ee garoonka Baghdahd ayaa kadib ahayd inay xaqiijiyeen imaanshihiisa iyo nooca kolonyada baabuur ee uu ku safrayey.
Markii intaas xog ah loo gudbiyey Mareykanka, durba waxaa soo kacday diyaarad drone ah, oo dhowr gantaal ku dhufatay kolonyada uu la socda Soleimani, oo uu ka mid ahaa Abu Mahdi Muhandis, oo ahaa hoggaamiye ku-xigeenka kooxda Shiicada ee Al-Shaxd Al-Shacab ee dalka Iraq. Guud ahaan waxaa goobta ku dhintay labadooda iyo 8 qof oo kale oo ilaalo ahaa.
By Wariye July 27, 2020
Afhayeen Maxamuud Oo Muddo Dhowr Bilood Ah Debad Wareeg Noqday Iyo Qasriga Madaxtooyadda Oo La Weriyey...
By Wariye July 22, 2020
(SLT-Khartoum)-Madaxweynihii hore ee Suudan, Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa waxa maanta lasoo taagay maxkamad, iyadoo maxkamadeyntiisu ay...
Jaamacadda Oxford Oo Ku Guulleysatay Tallaalka Cudurka Coronavirus
(SLT-London)-Jaamacadda Oxford ee ku taalla dalka Britain ayaa ku guulleysatay inay hesho tallaal ayey u badantahay...
JABUUTI Oo Ka Hadashay Dib U Bilaabista Wadahadallada Somaliland Iyo Soomaaliya
Dawladda Jabuuti ayaa sheegtay inay ku hawlan tahay diyaarinta saaxadii lagu geli lahaa wadaxaajoodyo lagu guulaysto...
Sucuudiga Oo Somaliland Ka Fulinaya Mashruuc Ay Ku Baxayso $2 Milyan Oo Doollar
By Wariye July 21, 2020
(SLT-Riyadh)-Hay’adda King Salmaan ee gargaarka iyo bini’aadannimada ee dalka Sucuudiga, ayaa qalinka ku duugtay mashruuc biyaha...
Kornayl Caarre Oo Shaaciyay Inuu Yahay Musharax Xildhibaan
By WariyeAugust 11, 2020
Faysal Cali Waraabe Oo Taageeray Shir Beeleed Dhawaan Ka Qabsoomay Muqdisho
Roob Xooggan Oo Dabaylo Wata Oo Khasaare Kala Duwan Ka Gaystay Degmadda Sallaxley
Nuxurka Kulan Dhex-maray Guddida Doorashooyinka Iyo Golaha Wakiillada Somaliland.
Xildhibaan Shaaciyay Inuu U Tartami Doono Golaha Deegaanka Degmada Berbera